2019-08-09 | Job Vacancy in Myanmar
2019-08-09 21:20:39 , အမြန်အင်တာဗျူး၍ခန့် ထားပါမည်…
💚အမြန်အင်တာဗျူး၍ခန့် ထားပါမည်💚 ရန်ကုန်(လှိုင်သာယာနဝဒေးအိမ်ယာ)ရှိ အထည်ကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်ရန်
❤️✔️Sale F(5) ဦး✔️❤️
💰အခြေခံလစာ 145000+ Attandance Bonus. Can be (180000)( If more than 20 days exhibition inamonth).💥အသက် (၁၈-၂၅) ကြား🔥အရောင်းအတွေ့ ကြုံရှိသူ✔️လိုအပ်ပါက ခရီးသွားနိုင်သူ(ခရီးသွားရပါက အစားအသောက်နှင့် နေစရာက်ု ကုမ္ပဏီဘက်မှ စီစဉ်ပေးပါမည်) – မနက်(၉) နာရီမှ ညနေ(၉)နာရီထိ – ပိတ်ရက် တစ်လ(၂) ရက်❗️center များတွင် အလုပ်ဆင်းရပါမည်။
လျှောက်ထားလိုပါက viber မှတစ်ဆင့် စုံစမ်းဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။☎️ 09-899655522 (viber)
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-08-09 by admin.
2019-08-09 21:20:35 ,မြန်​မာပြည်​တွင်းခရီးသွားများ…
မြန်​မာပြည်​တွင်းခရီးသွားများအတွက်​Trip Leader​ခေါ်ယူခြင်း 💬💬💬👬👬👬
မြန်​မာခရီးသွားလုပ်​ငန်း(MTT)မှသင်​တန်းဆင်းပြည်​တွင်းခရီးသွားများအားလိုက်​ပါဝန်​​ဆောင်​မှု့​ပေးနိုင်​ရန်​အတွက်​ Trip Leader Male-3​ယောက်​အလိုရှိပါသည်​။
အ​ခြေခံလစာ – ၁၇၀၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀၀ + ခရီးသွား Allowance ဝန်​​ဆောင်မှု့နှင့်​​​လုပ်ငန်း​​ကျွမ်းကျင်​ပိုင်​ဆိုင်​မှု့​ပေါ်မူတည်​ပါသည်​။ 💌💌💌💌
အခြား​လျှောက်​ချင်​သူများအတွေ့အကြုံမရှိပါလျှင်​ ခရီးသွားလုပ်​ငန်းအားစိတ်​ဝင်​စားပါက သင်တန်း​ပေးပြီး ​အောက်​ပါအချက်​များဖြင့်​ကိုက်​ညီလျှင် အလုပ်သင်အစမ်းခန့်အဖြစ်​ခန့်​​ပေးပါသည်​။👦👨👏👏👏
Cb or 09-695192878 သို့ဆက်​သွယ်​ CVများ​လျှောက်​ထားနိုင်​ပါသည်​။👋👋✌✌
2019-08-09 21:20:25 ,မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရ…
Car Accessories Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
Marketing ကျား – ၂ ဦးအလိုရှိသည်။
လစာ – 230000 ဝန်းကျင်
– အလုပ်ချိန် 8:30 to 5:30
– တစ်လ ၂ ရက်ပိတ်သည်။
– ချမှတ်ထားသော target ပြည့်မှီအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်
– အသက် 23-28 ဝန်းကျင်
– Marketing အတွေ့ကြုံ အနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရမည်
Way Expense တစ်​ရက်​ကို 10000ထပ်​​ပေါင်း​ပေးသည်**
ph/ viber 09691750966
သို့ CV ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။
2019-08-09 21:18:51 ,1. Sr.Site Engineer (Male/ Fem…
1. Sr.Site Engineer (Male/ Female ) (4 Posts)
A.G.T.I, B.Tech ,B.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။
2. Jr.Site Engineer (Male/ Female ) (4 Posts)
3. Site QA/QC Engineer (Male/Female) (2 Posts)
A.G.T.I, B.Tech ,B.E (Civil)ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။
4. Store Staff (Male/Female) (2 Posts)
5. Driver (Male) (2 Posts)
အမှတ် (၂၁၉) ၊ သစ္စာလမ်းမကြီး၊ (၁၃)ရပ်ကွက် (သံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး)၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပါတ် : 01 – 2330049 ၊ ၊ 09-448008300။
2019-08-09 21:18:38 ,ယာဉ်မောင်း၂ဦး အမြန် အလိုရှိသ…
ယာဉ်မောင်း၂ဦး အမြန် အလိုရှိသည်။
2019-08-09 21:18:32 ,Stock ပိုင်းအ​တွေ့အကြုံရှိသူမ…
Stock ပိုင်းအ​တွေ့အကြုံရှိသူများ အလုပ်​​ခေါ်​နေတယ်​​နော်​
2019-08-09 19:58:58 ,Admin Please!!
2019-08-09 19:58:58 ,Please Admin!
2019-08-09 18:04:34 ,#တပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးမည်။ Sale…
Sale & Marketing – ကျား/မ (၃) ဦး
စုစုပေါင်း ၂၀၀၀၀၀ ~ ၂၅၀၀၀၀ ကျပ်
✳ အဝေးသင်ရပ်နားထားသူ (သို့) ဘွဲ့ရ၊
✳ အသက် ၂၀ မှ ၂၇ နှစ်အတွင်း၊
✳ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂နှစ်ရှိသူ၊
✅ တာမွေမြို့ နယ်
✅ နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ၅း၃၀ အထိ
✅ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်ပါသည်။
👆👆 အထက်ပါအချက်အလက်များနှင့်ပြည့်စုံပါက 🏣 အခန်းအမှတ် ၄၄၁၊ (၄)လွှာ၊ Building (A)၊ သမိုင်းမုဒိတာအိမ်ရာ၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်သို့ နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ အတွင်း တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမှလွဲ၍ CV Form, Passport Photo ၁ပုံယူလာပြီး လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်
👉 🚗 သမိုင်းလမ်းဆုံမှတ်တိုင်၊ သမိုင်းဘူတာ၊ ဦးဘဟန် (ကြွေတစ်) မှတ်တိုင်များတွင် ဆင်းပြီးလျှင် သမိုင်းမုဒိတာအိမ်ရာ (၁) Building (A) သို့ရောက်လျှင် ဓါတ်လှေကားဖြင့် နံပတ် (၃)ကိုနှိပ်၍ အခန်းအမှတ် ၄၄၁ တွင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်
လူကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားပါက ယူလာရမည့်အချက်များ
💢 CV Form တစောင်တည်းသာ လိုပါသည်။ (အထောက်အထားမိတ္တူများ မလိုပါ)
💢 Passport ဓါတ်ပုံတပုံ ပါရမည်။
💢 တခါတည်း Pre အင်တာဗျူးပေးပါသည်။
☎ 09260250073, 09260250074 ဖုန်းများသို့